I-Ora Acres nge-Chazing Purple
‘I-ORA ACRES – NGOKUCHAZEKA OKUBUMBUZI’ ikumemela ukuba uphile impilo ngokugcwele. Zithole kabusha wena nabantu obathandayo futhi ujabulele inkululeko ephelele engenamingcele endaweni ekhululekile, engahlelekile, ethokomele, yasepulazini lapho ubuhle bemvelo buchichima khona, namahektha alo angu-13 epulazi elinezinhlobonhlobo zezitshalo nezihlahla, ezithela izithelo nemifino. nezilwane ezifuywayo ezikunikeza 'isipiliyoni sangempela sasepulazini'
Iholide noma ukubaleka ngempelasonto, ngokuvamile kubonakala njengokuwubukhazikhazi. Kungase kubonakale kuwukuzitika, mhlawumbe ngisho nobugovu kodwa kubaluleke ngokufanayo. Ekugcineni, esikufunayo sonke ukuphila okugxile ekuzinakekeleni nasekuthuleni kwangaphakathi, kodwa kufanele kuqale ngokunakekela izidingo zakho. Zithokozise! I-Introspect! Pamper! Xhuma ekunqamuleni!
Buyela emvelweni futhi ulalele umculo omusha, oqanjwe futhi wahlelwa yimvelo endlini yasepulazini. Hlabelelani kanye nezinyoni ezihlahleni. Izwa umoya omusha we-nippy ebusweni bakho. Yalusa izinkomo futhi uphakele izinkukhu namajuba endlini yayo yezinyoni phakathi kwamasimu, ukuxosha izimvemvane ezingadini. Thola injabulo ezintweni ezincane kakhulu.
Buya futhi uthandane nemvelo, buyela lapho ukuqina, ubuhle nokudla kuhlangana nemvelo, ukungahleleki kanye nokuphumula ukuze uvuselele umzimba wakho, ingqondo nomphefumulo wakho.
MAYELANA NE-ORA ACRES :
I-Farm House isendaweni ephakeme epulazini enikeza umbono we-panoramic wepulazi kanye namagquma aluhlaza nxazonke. Indlu yepulazi kubo bonke ubulula bayo, ubuhlaza kanye nesizotha icatshangwa ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi zonke izimfuneko zangaphambili zokuhlala ngokunethezeka zenziwe zitholakale kubavakashi bethu. Ovulandi ababanzi, utshani obuluhlaza obuluhlaza, ichibi elinokuthula elivulekile, i-gazebos ekhanyiswe kahle, igumbi lokulala elivulekele esibhakabhakeni elikunikeza umuzwa wokuthatha 'Ukuhamba Phakathi Kwezinkanyezi' kanye nayo yonke imvelo ekuzungezile ukuze ungene endaweni epholile & ekhangayo. kanye nemisindo yemvelo endaweni enamahektare angu-2 iyinika intelezi ye-'Olde worlde / village farmhouse'. Ukwamukela izivakashi abasebenzi bethu abanobungane ngesiphuzo esibandayo sejusi/amanzi/amanzi amathenda kakhukhunathi avela epulazini, okulandelwa ukuma kwesakhiwo ngesikhathi sokungena.
Amakamelo amabili okulala anomoya opholile 'e-Abode' afakwe kahle futhi anikeza indawo yokuhlala enethezekile nomuzwa 'wekhaya elikude nekhaya'. ‘Ama-Quarters’ - Indawo yokulala esesitezi sokuqala iyatholakala uma kunesidingo sokulala abantu abengeziwe. Womabili amagumbi okulala nendlu yokulala anamabhavu esimanje anamathiselwe anamanzi ashisayo nabandayo ubusuku nemini.
Ngesikhathi sisendlini, sigcina izingane nabantu abadala bematasa ngokulinganayo ngemisebenzi eyahlukene (imidlalo yasendlini) nezokuzijabulisa ezinikezwa yi-ORA ACRES.Imidlalo ehlukahlukene yasendlini ihlanganisa i-Chess, i-Carom, amakhadi okudlala kanye nemidlalo yeBhodi ehlukahlukene ngaphezu kwebhodi lomcibisholo. Ukuze uthole ukuzijabulisa okukhululekile, igumbi linikeza i-DTH TV kanye nohlelo Lomculo lwezivakashi zethu zokuzijabulisa. I-Pavilion ebheke endaweni yokubhukuda ohlangothini olulodwa nepulazi kwelinye iyindawo ekahle yokuhlangana komndeni. Kusihlwa indawo iziphendulela i-discotheque noma i-pool party loaction enokukhanya kwayo okucashile kodwa okukhazimulayo nomsindo, okukuvumela ukuba unyakazise umlenze nabathandekayo bakho. Ithala elibukeka kahle nxazonke liyindawo ekahle yokubukwa kwezinyoni ekuseni, niphuze inkomishi yetiye eshisayo, niphuze iSurya Namaskaras embalwa, noma nichithe ubusuku obuzolile nimunca ubuhle bemvelo obuzolile. yakha ngesiphuzo noma isiphuzo esishisayo. Iholide e-ORA ACRES ikunikeza ithuba elingandile lokuphila ngokuvumelana nemvelo futhi uchithe isikhathi esihle nomndeni wakho futhi ube nguwe nje.
Ukuzulazula kwelinye lama-hammocks futhi ujabulele ubumsulwa bemvelo kungenzeka kube umsebenzi ongcono kakhulu ongawenza ngenkathi usepulazini. Izandla zasepulazini zizokujabulela kakhulu ukukuvumela ukuthi ujoyine imisebenzi ehlukahlukene yasepulazini njengokukha amaqanda, ukusenga izinkomo noma ukunakekela imifino engadini ethokozisayo ezinganeni nakubantu abadala ngokufanayo futhi inikeza inqubo yokufunda cha. Izipesheli zokuphila kwedolobha. Uma ukhetha ukwenza okuhlukile, kunemisebenzi eyanele yasepulazini kanye nezindawo zokungcebeleka ukuze ugcine wonke umndeni umatasa kungakhathaliseki ukuthi ungaphandle noma ungaphakathi. Vuka uzwe ukukhala kwezinyoni futhi uthathe uhambo lwasepulazini ukuze uphefumule umoya opholile. Lapha ungahlangana eduze namakhulu ezithelo nezihlahla ezithela izimbali ezigabeni ezihlukahlukene zokuqhakaza. Ungakhohlwa ukondla izinja ezinobungane kanye ne-assortment enkulu yezinyoni.
Ipulazi linendawo yokubhukuda eklanywe ngobuhle ebekwe phakathi nemvelo ebizwa ngokuthi ‘The Blue Lagoon’. Ichibi linemiphetho ethokozisayo enokujula okuhlukahlukene okunikeza amathuba amakhulu okuzijabulisa ngaphandle kokubhukuda noma umdlalo webhola le-volley pool ngenkathi usechibini.
I-'CHAZING PURPLE' ikhuthaza ukuba luhlaza futhi bangabokuqala abacabangele ukuzizwisa kwe-‘Go-Green, Grow-Green’ kubavakashi babo. Sinikeza izivakashi ithuba lokuzenzela iplanethi eluhlaza. Lezi zihlahla zizokwenziwa zibe ngezomuntu siqu namagama ezihambeli futhi izithelo noma imifino ezizithelayo zizonikezwa ngesikhathi sokuvakasha kwakhe okulandelayo. Lokhu kuzokhuphuka ekhasini lethu le-Instagram ukuze kuthuthukiswe ukuqwashisa. Izihlahla ziyingxenye enhle yempilo yethu futhi inothisa izimpilo zethu ngokuba khona nje.
Siyavuma, ngeke uthole ikhadi lemenyu elide endlini yasepulazini. Imenyu yosuku iqukethe okukhethekile kwabapheki bangaphakathi endlini okungenzeka kube ngezifiso ukuze kuhambisane nolwanga lwakho. Imenyu ye-a-la-carte iyatholakala futhi ezivakashini zethu endlini yasepulazini. Umpheki uzokujabulela ukukulungiselela nokukuphakela ukudla ozikhethele kona. Sicela uzizwe ukhululekile ukujoyina naye ekhishini lethu elihlome ngokugcwele uma ufisa. Lokhu kungaba ithuba lokuvusa umpheki kuwe futhi umangaze owakwakho ngeminwe ekhotha izitsha.
Izinto ezifana namathawula okugeza, izinto ezixosha omiyane, isicishamlilo, njll. ziyingxenye yephakeji kuyilapho izinto zangasese, amabhethri, amanzi amabhodlela, ama-napkins e-sanitary njll. zitholakala ngokuthengiswa ngenani elilinganiselwe. Ngokutholakala kwezinto ezifana ne-Cotton Mattress / Pillows, amaSpredishithi Ombhede / Izingubo zokulala ezengeziwe. Okomisa izinwele njll, sicela uthinte umnakekeli.
Imithi: Kuwo wonke amakhawunta imithi yezifo ezivamile kanye nezingozi ezincane iyatholakala kanye nekhithi yosizo lokuqala. Sicela ubuze nonakekeli. Khumbula ukuphatha imithi yakho ethile njengoba usokhemisi oseduze eqhele ngamakhilomitha angu-3-4.
Izimpahla Zezemidlalo: Imidlalo nemidlalo eyanele iyatholakala ukugcina wonke umndeni. Sicela uzizwe ukhululekile ukuyicela, uma uba nobunzima bokuyithola. Kuzoba nediphozithi encane ye-500/- Rs. ngomsebenzi ngamunye okuzodingeka ukhokhelwe kusetshenziswa i-Google Pay noma ngokheshi, ezobuyiselwa ekhasimendeni ngesikhathi liyibuyisela ngaphambi kokuphuma. Sizama futhi siqinisekise ukuthi isivakashi esivakasha ngemva kwakho sinolwazi olufanayo ncamashi olunikezwa wena.
Ukubuka konke kwechibi